गढवा गाउँपालिकाको आ.व.०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम - Pradesh Today गढवा गाउँपालिकाको आ.व.०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम - Pradesh Today
१. नीति तथा कार्यक्रमहरू
१.१ कृषि तथा पशुपालन
– स्थानीय भू–उपयोग योजनाले पहिचान गरेको कृषि उत्पादन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै व्यावसायिक कृषि प्रणालीका माध्यमबाट कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– कृषिप्रधान मुलुक भएको कारण व्यवसायमा आवद्ध किसानहरूका लागि व्यवसाय प्रवद्र्धनअन्तर्गत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– यस गाउँपालिकामा उन्नत जातको पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई दूग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै दूग्धजन्य उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय रोजगारी सिर्जना र निर्यात बृद्धि नीतिको अबलम्वन गरिनेछ ।
– तरकारी खेती कृषकलाई किटनाशक औषधि, बीउबिजन जग्गाको आधारमा अनुदानको ब्यवस्था गर्नेछु ।
– कृषिको लागि कृषि गुरूयोजना तयार गर्नेछु ।
– शीत भण्डारको व्यवस्थापन गर्दै कृषि उपजको सुरक्षा उच्च मूल्य प्राप्तिको नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
– कृषि योग्य जमिनको अव्यवस्थित तथा गैर कानूनी खण्डीकरणलाई बन्देज गरिनेछ ।
– कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई कृषि कार्यमा प्रयोग गर्नको लागि कृषकहरूलाई अनुदानको ब्यवस्था गर्नेछु ।
– कृषि तथा पशु बिमालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– रेशम खेती तथा माछापालनलाई प्रोत्साहन गर्दैै लगिने छ र रेशम खेती विस्तार गर्न पहल गरिनेछ ।
– अर्गानिक खेती गर्ने किसानलाई कृषि शाखामार्फत लागत सहभागिताका आधारमा अनुदान दिइनेछ । ं
– विदेशबाट आएका युवाहरूलाई ब्यक्तिगत वा सामूहिक खेती गरेमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अनुदानको ब्यवस्था गर्नेछु ।
– स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सवलकिरण, क्षमता अभिवृद्धि, स्तरोन्नती गर्दै गढवा स्वास्थ्य चौकीलाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल बनाउने नीति लिइनेछ ।
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्दै गढवा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न पहल गरिनेछ । साथै स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी विस्तार गरिनेछ ।
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना नभएका वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिनेछ तथा पिछडिएको क्षेत्रहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापनाको नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
– महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूहहरूलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रोत्साहनको ब्यवस्था गर्नेछु ।
– गोबरडिहा स्वास्थ्य चौकीमा एम.वि.वि.एस डाक्टरद्वारा सेवा प्रदान ब्यवस्था मिलाउनेछु ।
– गा.पा.का सबै बस्तीहरूमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने छ र कमजोर आर्थिक अवस्थाका अति विपन्न परिवारका सुत्केरी महिलाहरू र जटिल अवस्थाका कारण जिल्लाभित्रका अन्य अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ ।
– आयुर्वेदको विकासमा जोड दिदै अन्य परम्परागत वैकल्पीक चिकित्सा प्रणालीको समूचित प्रयोग गरी स्वास्थ्यको लागि सक्रिय जीवनको नारालाई अगाडी बढाइनेछ । योग शिविरलाई संस्थागत तथा स्वास्थ्य प्रणालीको सूचकको रूपमा ल्याइनेछ ।
– सर्पदंश, रेविज खोप तथा छाडा चौपाया नियन्त्रणजस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
– संघीय सरकारको नीतिअनुरूप स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गरिने छ ।
– गा.पा.बाट दिदै आएको सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– सर्पदंशका बिरामीहरूलाई उपचार र यातायात खर्चको निरन्तरता दिइनेछ ।
– सर्पदंशको नवनिर्मित भवनमा सर्पदंश सेवा आउने साउनदेखी सञ्चालन गर्ने छु ।
– सिकलसेल बारेमा जनचेतना जगाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।
– आमा समूह तथा महिला स्वायंसेविका परिचालन गरी समुदायस्तरमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम गरिनेछ ।
– बालबालिकाको पोषण सुधार गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) महामारीबाट संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन ब्यवस्था निरन्तरता दिइनेछ । कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) बाट यस गापाभित्रको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारण जनताहरूको मृत्यु भएमा मृतकका घर परविारलाई एक लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
१.३ योजना तथा पूर्वाधार
– अधूरा तथा क्रमगत योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु ।
– गाउँपालिकाको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूसहितको वृहत् गुरूयोजना तयार गर्नेछु ।
– पूर्वाधारतर्फ वडा र गाउँपालिकास्तरमा गौरवका आयोजनाको रूपामा कम्तीमा १÷१ वटा योजना सञ्चालन गर्नेछु ।
– कोइलाबास भन्सार नाका सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारसँगको समन्वयबाट गढवालाई व्यापारीक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछु ।
– सिचाईको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै कृषिमा आधारित स्थानीय अर्थतन्त्र सवलीकरण गर्ने नीति अवलम्वन गर्नेछु । साथै बड्कापथ सिंचाई योजनाको अधूरो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्नेछु ।
– गढवा क्षेत्रमा आयोजना हुने विभिन्न वृहत कार्यक्रमहरूको सुसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आ.व. २०७६/०७७ देखि निर्माण हुन थालेको खेलकुद मैदान निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पूरा गर्नेछु ।
– युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अध्यक्ष कप प्रतियोगितालाई निरन्त्ररता दिईनेछ ।
– गढवा गाउँपालिकाभित्र नयाँ शहर निर्माण गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग विशेष पहल गरिनेछ ।
– स्थानीय हस्तकला माटोको भाँडा निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित तथा बजारीकरण गर्न उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरी प्रोत्साहन गर्नेछु ।
– परम्परागत सीप, पेशा भएका जनजातिको संस्कृति, परम्परा भेषभूषालाई संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशसँगको साझेदारीमा थारू संग्राहलय स्थापना गर्न पहल गर्नेछु ।
१.४ सेवा प्रवाह, सुशासन र संस्थागत विकास
– गापाको प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा सञ्चार, विद्युत आदिको पहुँच सबै वडातहमा विस्तार गरी उचित कार्य वातावरणमा मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहमा जोड दिनेछु ।
– सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न क्षमता अभिवृद्धि कार्य र कार्य सम्पादनको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेछु ।
– विद्युतीय हाजिरी, विद्युतीय नागरिक वडापत्र, मोवाइल क्ःक् प्रणाली, नागरिक क्ःक् प्रणाली, एल.ई.डि. डिस्प्ले र उच्च क्षमताको नेट जडान गरी सूचना प्रविधिमैत्री गाउँपालिका निर्माणमा निरन्तरता दिनेछु ।
– पारदर्शिता र जवाहदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता विधि उपयोग गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेछु ।
– गाउँपालिकाबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरूमा छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटरकृत सेवा प्रणालीको विकास गर्दै लगिनेछ ।
– दर्ता भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई परिचालन गरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
– सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न पहल गरिनेछ ।
१.५ खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ
– जनताको स्वास्थ्यको लागि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचका लागि पूर्ण सरसफाईको अभियानसहित खानेपानी र सरसफाईलाई प्राथमिकता दिनेछु ।
– सार्वजनिक शौचालय, पर्यटकीयस्थल, पिकनिक पार्कहरू, धार्मिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सरसफाई क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिनेछ ।
– फोहरमैला विर्सजनको लागि ल्याण्डफिल्ड साइटको अझै ब्यवस्थित गर्नेछु ।
– विद्युत कार्यालयमा समन्वय गरी कोइलाबासमा खानेपानीको वितरणलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ ।
१.६ सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
– निर्माणाधिन बड्कापथ सिंचाई आयोजनालाई कार्यक्षेत्र विस्तारसहित केन्द्रीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ ।
– सबै वडाहरूमा सिंचाई पहँुच नभएका स्थानहरूमा बोरिङको ब्यवस्था गर्नेछु ।
१.७ व्यवस्थित बसोवास र भवन निर्माण
– गाउँपालिकाको भूउपयोग योजना तथा भवन निर्माण मापदण्डले तोकेको स्थानहरूमा निर्धारित मापदण्ड कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित र सुन्दर बस्ती निर्माणको नीति लिईनेछ ।
– यस गापा क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गरेका तर भोगचलन गर्दैआएका व्यक्ति तथा सामुदायिक संघ संस्थाको लगत लिइनेछ ।
– डकर्मीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न तालिम प्राप्त डकर्मीहरूबाट मात्र भवन निर्माण गराउने नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
– भवन निर्माण संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको बारेमा व्यापक जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– गापाभित्रको आवादी सार्वजनिक जग्गा र राप्ती नदी किनारको जग्गा संरक्षण गरी कृषि तथा अन्य उद्योगका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
– सबै वडाहरूमा घर निर्माण गर्नु अघि नक्सा पास अनिवार्य रूपमा लागू गर्नेछु ।
१.८ संस्कृति तथा पर्यटन
– गापा क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेछु ।
– धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण यस क्षेत्रका ऐतिहासिक साँस्कृतिक महत्वमा पहिचान र संरक्षणमा विकास गर्न त्यस्ता स्थानहरूको संरक्षण प्रवद्र्धनको नीति लिइनेछ ।
– मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च साथसाथै क्षेत्र तथा नदी ताल–तलैयाहरूको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरिनेछ ।
– पर्यटन तथा रोजगारका लागि रेशम खेतीलाई थप विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ ।
– भाषा, कला, साहित्य तथा समृद्धिका लागि साहित्यीक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ ।
– संघ, प्रदेशसँगको साझेदारीमा अवधि साँस्कृतिक संग्राहलय स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।
– वडा नं.८ कोइलाबासलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नेछु ।
१.९ वन तथा वातावरण
– जीविकोर्पाजनको लागि वनको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन यस क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक साझेदारी, धार्मिक र कवुलियती वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र नियमनमा जोड दिनेछु ।
– हरियाली तथा वातावरणमैत्री विकासलाई निरन्तरता दिई हरियाली सडक प्रवद्र्धन कार्यलाई अगाडी बढाउनेछु ।
– शिक्षाको उज्यालो प्राप्त गर्न नसकेका अति दुर्गम सालभौरीजस्ता नाकामा बालबालिकाहरूको पढ्ने, लेख्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी शैक्षिक पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– उच्च शिक्षाको पहुँचलाई सहज बनाउन सञ्चालित क्याम्पसहरूलाई I.C.T. सामग्री उपलब्ध गराउनेछु ।
– गाउँपालिकाभित्र प्राविधिक धारतर्फ कम्तीमा ३ विधामा माध्यमिक तह सञ्चालन गरिनेछ ।
– सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर तथा भौगोलिक आवश्यकता अनुसार एकआपसमा मर्ज गरी स्थानीय करार शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– विद्यालय क्षेत्रलाई बालमैत्री तथा शान्ति एवं सबै प्रकारका विभेदमुक्त क्षेत्रको रूपमा विकास गरी छात्रवृत्ति र पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१.११ युवा तथा खेलकुद
– प्रदेशसँगको साझेदारीमा गढवा क्षेत्रलाई पहिचान दिन सक्ने व्यवस्थित र आधुनिक खेलकुद मैदानको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनेछु ।
– युवाहरूलाई व्यवसायीक, सीपमूलक तालिम दिई आयआर्जन बृद्धि गर्ने कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ ।
१.१२ महिला तथा सामाजिक समावेशीकरण
– सबै प्रकारका घरेलु हिंसाबाट महिलाहरूलाई न्याय दिलाईनेछ । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरी सहायता पु¥याउन सुरक्षित आवासलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम पिछडा वर्ग आदिका लागि प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– कम्लहरी, हलिया तथा कमैया प्रथालाई निरूत्साहित गरिनेछ । साथै बालश्रम, बालविवाह र बहुविवाहलाई निरूत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।
– बेरोजगार महिलाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम समन्वय गरी रोजगारको ब्यवस्था गर्नेछु ।
– प्रत्येक वडाका बाल क्लव गठन गरी गापास्तरीय बाल सञ्जाल बनाइनेछ ।
– बालअधिकारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
– बालहिंसाजन्य क्रियाकलापलाई निरूत्साहित गरिनेछ ।
– सबै वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
– सौर्य, जल तथा वायु उर्जाका माध्यमबाट आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण पु¥याउन ‘उज्यालो गढवा कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– विद्युत क्षेत्रको समग्र समस्याहरूलाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्ने गरी गापा क्षेत्रमा विद्युतको सवस्टेशन निर्माण, क्षमता विकास र महशुल काउन्टर सञ्चालनको पहल गरिनेछ ।
१.१४ अर्थ तथा राजस्व
– ‘हाम्रो कर हाम्रै लागि’ भन्ने अभिप्रायका साथ यस गाउँपालिकाको समृद्धि र अति आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि श्रोत जुटाउन आधारभूत करका दरहरूलाई यस वर्षमा यथावत राख्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने नीति लिइएको छ ।
– यस गढवामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।
– स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालनमा ल्याई उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मानको नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
– आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी (ए.ए.ए.) को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
– गाउँपालिकास्तरीय राजस्व प्ररामर्श समितिले राजस्वका श्रोत, दर र दायरा अध्ययन विश्लेषण गरी दिईएका सुझाव एवं सिफारिसलाई गाउँपालिकाको राजस्व नीतिको आधारमा अवलम्बन गरिनेछ ।
– बेरूजी फछ्र्यौट गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लगिनेछ ।
– गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अन्तरिक आयका श्रोतहरूको पहिचान तथा समूचित उपयोग गरी समयानुकूल आन्तरिक श्रोतको पहिचान गरी वृद्धि गरिदै लैजानेछ ।
– वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरिनेछ ।
– उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरी बजार व्यवस्थापन समितिहरूलाई क्रियाशील बनाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, सरसमानको मूल्यमा एकरूपता ल्याई प्रत्येक पसलमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राखिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– दर्ता भएका वा नभएका सहकारी संस्थाहरूलाई दर्ता गरी प्रोत्साहन गरिने नीति ल्याइनेछ ।
– बैंक वित्तीय संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई गापामा दर्ता गरी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न नीति ल्याइनेछ ।
– स–साना घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै ठूला उद्योगहरूलाई व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
– व्यापारीहरूलाई कर बुझाउन सजिलो हुने जानकारी दिन कर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– यस गापा सञ्चालित ब्यापार, ब्यवसाय उद्योगलाई दर्ता नभएका फर्मलाई उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई अझै सहज र प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक विकासको साझेदारको रूपमा परिचालन तथा नियमन गरिनेछ ।
– यस गाउँपालिकामा रहेका जेष्ठ नागरिकलगायत सबैलाई निःशुल्क आँखा उपचार सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– यस गापाको वडा नं. १ देखी ७ सम्म राप्ती नदीले वर्षैपिच्छे धार परिवर्तन गरी क्षति पु¥याउनुको साथै विपद् ल्याउने भएकोले सो रोकथामको लागि बहावलाई बीच नदीबाट बगाउनको लागि आवश्यक पहल गनेछु र सोबाट उत्खनन् गर्दा प्राप्त भएको नदीजन्य पदार्थ बेचबिखन गरी गापाको आन्तरिक श्रोत वृद्धि गनेछु ।
– गापाको विकास गर्नको लागि वडा नं. १ देखि वडा नं. ८ सम्मका D.P.R. गर्न बाँकी रहेका सडकहरूलाइ म्।ए।च्। गर्नेछु ।
– गापाअन्तर्गतका खोलानाला, राप्ती नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी गापाको आयश्रोत वृद्धि गर्नको लागि नदी, नाला, खोलाहरूको D.P.R. गर्नेछु ।
– जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य शिविर उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी ७० वर्ष माथिका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको निम्ती घुम्ती टोलीको व्यवस्था गरिनेछ ।
– स्थानीय आपत्कालीन सेवा केन्द्र स्थापना गरी विपद्को सूचना प्राप्त गर्ने पद्धति सुचारू गरिनेछ ।
– निर्माण कार्यमा जनसहभागिता परिचालन गरिने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत गर्नेछु ।
१.१६ सूचना तथा प्रविधि
– प्रत्येक वडामा अनलाईन पञ्जीकरण, घटनादर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– सबै वडामा इन्टरनेट जडान, नेट वर्किङ गरिनेछ ।
– सबै वडाहरूमा अनलाईन राजस्व सफ्ट्वयेर जडान गरिनेछ ।
– योजना, लेखा सफ्ट्वेयरहरू जडान गरिनेछ ।
२.गाउँपालिकामा हालसम्म भएका भौतिक प्रगति विवरण
– लमही–कोइलाबास सडक कालोपत्रे कार्यका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेको ।
– कालाकाटे हुलाकी सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक पहल भएको ।
– गाउँपालिका प्रशासकीय भवनलगायत वडा नं. ३ र ७ सम्पन्न भएको र वडा नं. १ र ५ निर्माण कार्य भइरहेको ।
– यस गापाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा पक्की नाला बाटो कालोपत्रे कार्य भएको ।
– सर्पदंशको भवन र आर्मी क्वाटर भवनको काम सम्पन्न भएको ।
– वडा नं. ४ को उठैयादेखि कक्रहवा सडक कालोपत्रेका लागि बहुबर्षीय ठेक्का भएको ।
– वडा नं. ६ बुद्धज्योति चोकदेखि थान देउखर आटिपाकर हँुदै राप्ती पुल जोड्ने बाटो सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत भवन डिभिजन कार्यालयबाट टेण्डर भएको ।
– वडा नं. ५ मगरीदेखि लोखरपुर धर्मपुर जोड्ने बाटो सघन सहकारी कार्यक्रम अन्तर्गत भवन डिभिजन कार्यालयबाट टेण्डर भएको ।
– वडा नं. १ जुरौनीदेखि चिसापानी हँुदै धानखोला जोड्ने बाटो सहरी विकास अन्तर्गत टेण्डर भएको ।
– वडा नं. २ को चिमचिमेसम्म विद्युत लाइन विस्तार भएको ।
– वडा नं. ८ मुसीनाकामा विद्युत लाइन विस्तार भएको ।
– प्रत्येक वडाहरूमा यस आ.व.मा पक्की नाला बाटो ग्राभेल, कालोपत्रे कार्य भएको ।
– सामुदायिक महिलाहरूको लागि महिला भवन निर्माण कार्य भएको ।
– मावि गोबरडिहा, मावि पचहिया, मावि जनतामा भौतिक निर्माण तथा मर्मत कार्य भएको ।
– वडा नं. ३ मा गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण कार्य भैरहेको ।
– कालाकाटे मावि, पचहिया मावि, मानपुर माविमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य भएको ।
– गढवा गापाको प्रत्येक वडाहरूमा खानेपानीका योजनाहरू प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन भैरहेको ।
– विपद ब्यवथापनको लागि गढवा गापाबाट दमकल खरिद गरी प्रयोगमा आएको ।
– विपद् ब्यवथापनको लागि रेडक्रससँग समन्वय गरी विपद् ब्यवथापन सम्बन्धी कार्यहरू भैरहेको ।
– प्रत्येक वडाहरूका लागि प्राविधिक जनशक्तिहरूको पदपूर्ति भएको ।
– सूचना प्रविधिमैत्री वडा बनाउने कार्य भैरहेको ।
‘कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारी कोभिड–१९ विरूद्धको खबरदारी’ भन्ने नारालाई साकार पार्नका लागि माथिका नीति तथा कार्यक्रमहरू खम्बाको रूपमा रहनेछन् । नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गाउँपालिकाबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले यहाँ उपस्थित सभा सदस्य ज्यूहरू, क्रियाशील राजनीतिक पार्टी, सरकारी निकायहरू,
गैर सरकारी संस्थाहरू, सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, कर्मचारीसहित सम्पूर्ण गढवा गाउँपालिकाबासीहरूको रचनात्मक एवं सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ रोकथाम अभिमुखीकरण
नालाभन्दा बाहिर व्यवसायीले सामान नराख्ने
देशभरका साईकल यात्रुहरु दाङ आउँदै